I-App Press: The Mobile App Designer for Designers | Martech Zone
NgeSonto, uJanuwari 27, 2013 NgoLwesine, Juni 18, 2015 Douglas Karr
Uhlelo lokusebenza Cindezela yasungulwa ukuvala igebe lolwazi phakathi kwabadwebi bezithombe nabathuthukisi. Njengomklami, umsunguli uGrant Glas wayefuna ukwakha ikhodi yezinhlelo zokusebenza mahhala. Njengonjiniyela, uKevin Smith wabhala ikhambi. Benze izinhlelo zokusebenza ezingama-32 besebenzisa inguqulo yokuqala ye-App Press futhi selokhu yethulwa, abasebenzisi abangu-3,000 + benze izinhlelo zokusebenza kungxenyekazi yabo.
I-App Press yadalwa ukuthi ibukeke njenge-Photoshop futhi isebenze njenge-Keynote. Lokhu kuvumela noma yimuphi umklami ukuthi angene futhi aqale ukwakha ngokushesha. Alikho elinye ithuluzi lokudala uhlelo lokusebenza elibukeka futhi lisebenze njenge-App Press.
Izici ze-App Press
Isihleli Sesakhiwo - Qala ukudala uhlelo lwakho lokusebenza kungakapheli imizuzu usebenzisa isihleli sesakhiwo. I-App Press iqala njengendwangu engenalutho futhi ivumela umklami ukuthi enze amakhasi asebenzisa umqondo wokubeka. Layisha izendlalelo emakhasini bese unikeza ngokukhethekile ukusebenza okuvunyelwe ukusebenza kokuthinta. Xhuma kwamanye amakhasi kuhlelo lwakho lokusebenza noma kumawebhusayithi angaphandle ngezendlalelo ze-hotspot; dala ukuzulazula okuqondile noma okungekho emgqeni. I-App Press isuselwe kuwebhu futhi ayidingi ukufakwa kwesoftware. Akunandaba ukuthi uku-Mac noma i-PC, ekhaya noma emsebenzini, ungafinyelela kumadizayini akho noma kuphi, nganoma yisiphi isikhathi.
Ilabhulali Yezimpahla - Layisha zonke izendlalelo zohlelo lwakho lokusebenza kulabhulali yakho yamafa. Ukuze uthole indlela esheshayo nelula, xhuma i-akhawunti yakho yeDropbox bese uqeda inqubo yokulayisha ngokuphelele. Ithimba lethu labaqambi liphinde lahlanganisa izimpahla eziningi zamahhala. Lezi zimpahla zifaka izinkinobho, izizinda, izihloko nonyaweni abangasetshenziswa noma ngubani kuhlelo lwabo lokusebenza. I-akhawunti ye-Basic App Press iqala ngesikhala esingu-100 MB selabhulali yakho kanti i-akhawunti ye-Pro ine-500 MB.
Qala Ukuklama Manje - Inqubo yokubeka ehlukanisayo ijwayelekile kunoma yimuphi umklami. Kusukela kwethulwa i-Photoshop 3.0 ngo-1994, ukubeka kube yindlela ethembekile yabo bonke abaklami. Ukwenza lowo mqondo ku-App Press kuvumela noma umqambi omncane ukuthi enze izinhlelo zokusebenza ngempumelelo nangempumelelo. Khetha isendlalelo kulabhulali yakho yefa bese usibeka ku-canvas wakho ongenalutho. Inqubo yokuklama ilula, ilula futhi ihlanzekile.
Dala Izigaba Namakhasi - Uhlelo lokusebenza olwenziwe ku-App Press luqukethe ukuthinta nokubukeka kocezu lokuphrinta ngenkathi luqoshwe ngomqondo wokuzulazula wewebhusayithi. Yakha izigaba ukudala ukuzulazula okungekho emgqeni okuxhunyaniswe ndawonye ngezindawo ezishisayo noma ukwakha ukuzulazula komugqa okugeleza njengamagazini. Dala isipiliyoni ngokungafani nanoma iyiphi enye usebenzisa i-App Press.
Izindawo zokudlela okulula - Ngeza ngokushesha ukuthinta ukuzula nokusebenza kohlelo lwakho lokusebenza ngezindawo ezidonsela kuzo. Kunezinhlobo ezintathu ze-hotspot ku-App Press ezikuvumela ukuthi uxhumanise amakhasi akho ndawonye, ​​udonse okuqukethwe kwewebhu noma uhlanganise ukuthepha okukodwa kwe-Twitter nokwabelana nge-Facebook.
I-App Press nayo isizenzele eyayo Uhlelo lokusebenza lokuhlola kuqala. Uhlelo lokusebenza likuvumela ukuthi ubuke kuqala ngokushesha uhlelo lwakho lokusebenza kunoma iyiphi idivayisi. Lolu hlelo lokusebenza lwamahhala luyatholakala ku-App Store, ku-Google Play nanjengohlelo lokusebenza lewebhu. Yifake ku-iPhone yakho, i-iPad, i-iPod Touch, ifoni enikwe amandla i-Android kanye / noma ithebhulethi ukuze ubuke kuqala noma yiziphi izinguquko ozenzayo.
Ungahlola ezinye zezinhlelo zokusebenza ezakhiwe ku-App Press kusayithi labo.
Tags: uhlelo lokusebenza lwe-Androiduhlelo lokusebenza cindezelauhlelo lokusebenzauhlelo lokusebenza lwe-ipaduhlelo lokusebenza le-iphoneuhlelo lokusebenza lweselulaukwakhiwa kohlelo lokusebenza lweselulauhlelo lokusebenza lwethebhulethi
Feb 2, 2013 ngo-11: 28 AM
Kuhle. I-App Press iyinkundla enhle yabaklami nabathuthukisi. Ivala igebe eduze.